Football Khabar » केनले पहिलो हाफमै हाने ह्याट्रिक : रोनाल्डोको २ गोल !
केनले पहिलो हाफमै हाने ह्याट्रिक : रोनाल्डोको २ गोल !
युरो कप छनौट खेलमा अहिले विभिन्न पाँच खेल चलिरहेका छन् । पहिलो हाफमा इंग्ल्यान्ड र पोर्चुगलले सहज अग्रता लिएका छन् । आफ्नो घरमा इंग्ल्यान्डले ५–० को अग्रता लिएको छ ।
इंग्ल्यान्डका लागि ह्यारी केनले खेलको १८औं र २४औं मिनेटमा गरी २ गोल गर्दा ११औं मिनेटमा एलेक्स ओक्सलाडे च्याम्बर्लिनले पहिलो गोल गरे । त्यस्तै, खेलको ३०औं मिनेटमा मार्कुस रासफोर्डले चौथो गोल गरे । त्यसपछि ३६औं मिनेटमा केनले गोल गर्दै आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे ।
यता, अर्को खेलमा पोर्चुगलले लिथुनियाविरुद्ध २–० को अग्रता बनाउँदा २ वटै गोल रोनाल्डोले गरे । उनले सातौं मिनेटमा पहिलो गोल पेनाल्टीमार्फत् गर्दा २२औं मिनेटमा बक्स बाहिरबाट लामो दूरीको सटमा दर्शनीय गोल गरेका थिए ।
अन्य खेलमा सर्बियाले २–० को अग्रता बनाउँदा फ्रान्स र माल्डोभाले १–१ को बराबरी खेले । त्यस्तै, चेक रिपब्लिक र कोसोभाले ०–० को बराबरी खेल्दा अल्बानिया र एन्डोराले १–१ को बराबरी खेले ।
प्रकाशित मिति २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०२:१९